Dastabej » ईमरजेन्सी राहदानी बनाउने बढे
ईमरजेन्सी राहदानी बनाउने बढे – Dastabej
ईमरजेन्सी राहदानी बनाउने बढे
मानव तस्करको निशानामा महिला
नेपालगन्ज । मधुवन नगरपालिकाकी सपना परियार राहदानी बनाउन सिफारिस लिन स्थानीय प्रशासनमा निवेदन दिईन । उनी जापान जानका लागि राहदानी बनाउन खोजेका हुन । जिल्ला प्रशासनका अधिकारीले केही जिज्ञासा राखे—कति दिनमा राहदानी बनाउने हो ? उनले दुई दिनमै राहदानी बनाउन २० हजार तिर्ने भनिन् । यति हतार किन ? ‘एक हप्तामा राहदानी लगायतका सबै काम नसक्ने हो भने विदेश जान पाईदैन,’ सपनाको जवाफ थियो । इमरजेन्सी राहदानी बनाउन उनी हवाईमार्ग भएर काठमाडौं जाने तयारीमा थिईन । राहदानी शुल्क र काठमाडौं आउजाउ गर्न हवाई भाडा गरी कम्तिमा पनि ५० हजार खर्च तिर्न तयार छिन । उनको हतारो देखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका अधिकारीहरुले सम्झाउन खोजे । बैदेशिक रोजगारी जाने क्रममा सवाधानी नअपनाए मानव तस्करहरुले बिक्री गर्नसक्ने सुझाव दिए । कसैको बहकाउमा नलाग्ने आग्रह गरे । तर किशोरीले प्रशासकिय अधिकृत सुवेदीको सुझावलाई ठाडै अस्विकार गरिन । ‘मलाई सबै कुरा जानकारी छ सर । मलाई केही हुदैन । हजुरले सिफारिस गरिदिए हुन्छ,’ सपनको जवाफ थियो ।
पछिल्लो समय बाँके र बर्दियामा बैदेशिक रोजगारीका लागि राहदानी बनाउने महिलाको संख्या बढेको छ । मानव तस्करहरुले महिलाहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर बिदेश पठाउने भन्दै बिक्री गर्नसक्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनले सतर्कता अपनाएको छ । त्यसका लागि प्रशासनले बिचौलियाहरुलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको छ । मानव तस्कहरुले राहदानी बनाउन लाग्ने शुल्क र भिसा खर्च तिर्ने गरेका छन् । त्यसको प्रलोभनमा बर्दियाका कतिपय महिलाहरु पर्ने गरेका छन् । सपना एक पात्र हुन । बिदेश जाने भन्दै बाँके र बर्दियाका महिला रादहानी सिफारिस लिन दैनिक आउने गरेका छन् ।
एक सातामा राहदानी बनाउँदा १० हजार शुल्क तिर्न पर्छ । तीन दिनमा राहदानी बनाउँदा १५ हजार र दुई दिनमा बनाए २० हजार शुल्क बुझाउनु पर्छ । राहदानी बनाउने अधिकांश महिलाले बढी शुल्क तिरेर दुई दिनमै बनाउने गरेका छन् । बढी पैसा प्रलोभनमा बैदेशिक रोजगारमा जान महिला आर्कषण बढ्दो छ । विदेश जान उनीहरुलाई कतिसम्म हतार छ भने दोब्बर शुल्क तिरेर राहदानी बनाउने गरेका हुन । जिल्ला प्रशानसन कार्यालयमा राहदानी बनाउन दैनिक करिव पाँच दर्जन युवायुवतीहरु आउने गरेका छन् । ती मध्ये करिव आधा जतिले दोब्बर दस्तुर तिरेर दु्रत सेवा (इमारजेन्सी) सेवा लिन आउने गरेक छन् । इमारजेन्सी राहदानी लिने मध्ये महिलाको संख्या बढी छ । कतिपय महिलाहरु परिवारलाई जानकारी नै नदिए लुकीछिपी राहदानी बनाउन आउने गरेको पाइएको छ ।
बाँके र बर्दिया प्रशासनबाट करिव चार हजार बढीले ईमरजेन्सी भिसा लिएका छन् । धेरै पैसा कमाउने प्रलोभनमा बैदेशिक रोजगार जाने गाउँगाउँमा लहड नै चलेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरु ब्याजमा ऋण खोजेर भएपनि बिदेश जाने गरेका छन् । पछिल्लो सयममा बैदेशिक रोजगारी तर्फ महिलाहरु पनि आर्कषित भएका छन् । युवाहरु बिदेश गएपछि गाउँमा महिलाहरु बढी भेटिन्थे । तर, पछिल्लो समयमा युवतीहरु पनि विदेश जान थालेपछि बृद्धाहरुको भरमा गाउँ चल्न थालेका छन् । गृह मन्त्रालयले समान्य तरिकाले निवेदन दिएको ४५ दिन भित्रै राहदानी उपलब्ध गराउ“ने नियम छ । त्यसका लागि ५ हजार रुपैयाँ सरकारी दस्तुर तिर्नु पर्छ । इमारजेन्सी सेवाका लागि स्थानीय प्रशासनबाट सिफारिस लिएर राजधानी जानुपर्छ । नेपाली महिलाहरु बिक्री हुनसक्ने भन्दै सरकारले भारत भएर बैदेशिक रोजगारी जान रोक लगाएको छ । तर, मानव तस्करहरुले भारतको दिल्लीमा भीसा बनाई दिने भन्दै भारत लैजाने गरेको पाइएको छ । कतिपय नेपाली महिलालाई पर्यटक भीसामा पनि विदेश पठाउने गरेको पाइएको छ । ‘छिटो धनि हुने चाहना जोकोहीलाई छ । यसैलाई मानव तस्करहरुले ठूलो हतियार बनाएका छन्,’ नेपालगन्ज नाकामा रहेको माईती नेपाल नेपालगन्जका संयोजक केशव कोइराला भन्छन्,‘तस्करहरुले सन्जाल मार्फत प्रलोभनमा पार्छन र भारत लैजान्छन् ।’ बैदेशिक रोजगारीका लागि भारत गएका कतिपय महिलाहरु सम्पर्कबिहिन हुने गरेका छन् । माईती नेपाल नेपालगन्जका अनुसार नेपालगन्ज सीमा हु“दै भारत गएका करिव साढे ५ सय महिला हरेक वर्ष सम्पर्कबिहिन भएको भन्दै खोजीका लागि निवेदन पर्ने गरेको छ । बैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक पठाउने भन्दै भारत लगिएका नेपाली महिलाई उद्दार गरी फिर्ता पठाइने गरिएको छ । तर उद्दार गरिएका तिनै महिलाहरु फेरि पनि भारतमै पुग्ने गरेका छन् । जसका कारण उनीहरु बेचबिखनको उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन् । त्यसरी फिर्ता पठाइएका महिलाहरुको पहिचानका लागि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुले अभिलेख राख्ने गरेका छन् । भारत जाने नेपालीहरुको परिचयपत्र अनिवार्य नगरिएका कारण हराएकाहरुको खोजिमा समस्या हुने गरेको छ । भारतको दिल्ली एयरपोर्ट हुँदै खाडी मुलुक पुगेका सयौ नेपाली महिलाहरु अझै पनि हराइरहेका छन् । तर उनीहरुको पहिचान हुननसक्दा उद्दार हुन असम्भव हु“दै आएको छ । भारतकै देहात संस्थाका डा. जितेन्द्र चर्तुबेदीले सीमाबाट उद्दार गरिएका नेपाली महिला तथा बालबालिकाहरुलाई नेपालका अधिकारीहरुलाई बुझाउने गरेको बताए । ‘हामी नेपाल—भारत सीमामा काम गर्दै आएका छौँ । दैनिकजसो महिलाहरुलाई उद्दार गर्छौ,’ उनले भने,‘कतिपय महिलाहरु पटकपटक दोहोरिएर भारत आउने प्रयास गरेको भेटेका छौ“ ।’ हराएका तथा बेपत्ता भएका महिला र बालवालिकाको खोजिका लागि सरकारी संयन्त्र छैन । विदेशमा बेपत्ता भएकाहरुको उद्दारका लागि पनि सरकारी संयन्त्रण नहु“दा समस्या भएको हो । बैदेशिक रोजगारका लागि खाडीमुलुक जाने भन्दै भारत गएका महिलाहरु हराउने बढीजसो सम्पर्कबिहिन हुने गरेका हुन । बास्तविक ठाउँ र प्रभावकारी संयन्त्र अभावमा बेपत्ताहरुको खोजि हुनसकेको छैन । ‘हराएका महिला र बालवालिकाहरुको खोजिका लागि सरकारी संयन्त्र छैन । बैदेशिक रोजगारीको नाममा अवैधरुपमा भारतीय बाटो हुँदै खाडी मुलुक गएका महिलाहरु यौन तथा श्रम शोषणको उच्च जोखिममा पर्ने गरेका हुन । रोजगारका लागि बिदेशीने महिलाहरुको बस्ने बास्तविक ठाउँ जानकारी नहुने हुँदा उद्धार गर्न असम्भव बन्दै गएको हो । बैदेशिक रोजगारका लागि गएका महिलाहरु हराउने क्रम बढ्दै गएपनि अझैपनि बिदेश जान चाहनेहरुको कमी छैन । विपन्न परिवारलाई दलालहरुले सजिलै प्रलोभनमा पारेर महिलाहरुलाई भारतको बाटो भएर बिदेश पठाउने गरेको पाइएको छ । प्रभावकारी संयन्त्रबिना ती महिलाहरुको उद्धार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको त्यस क्षेत्रमा कार्यरतहरु बताउँछन् ।
२४ चैत्र २०७७, मंगलवार १५:५५ प्रकाशित